10 အလိုရှိဆုံးစုံတွဲများခရီးစဉ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 အလိုရှိဆုံးစုံတွဲများခရီးစဉ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ
ရင်ခုန်စရာ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, အီတလီ၏ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်, အိမ်တံခါးပြင်ပမှာပြင်သစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း၌တည်၏, ဒါမှမဟုတ်တစ်နေရာရာမှာတရုတ်နိုင်ငံ, ဒီထိပ်တန်း 10 လိုချင်သောစုံတွဲများခရီးစဉ်ကိုသင်အံ့သြလိမ့်မည်.
1. အလိုအပ်ဆုံးစုံတွဲများခရီးစဉ်: ပဲရစ်မြို့ရှိ Romantic City Break
အများဆုံးရင်ခုန်စရာရုပ်ရှင်မှလှုံ့ဆော်မှု၌တည်၏, Paris သည်ဟောလိဝုဒ်ပုံစံစုံတွဲခရီးစဉ်အတွက်စိတ်ကူးယဉ်ဆုံးနေရာဖြစ်သည်. အများဆုံးရင်ခုန်စရာမြို့, နှင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးခရီးသွားတစ် ဦး, နေဆဲနှင့်အစဉ်အမြဲစုံတွဲများအဘို့အလိုချင်သော ဦး တည်ရာဖြစ်.
သငျသညျပြင်သစ်အရာအားလုံးကိုများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါက, အချစ်, ပြင်သစ်ဥယျာဉ်, နှင့်ချစ်စရာကောင်းလမ်းကြား, ထို့နောက်မြို့ချိုး ပဲရစ်မှာမင်းအတွက်အကောင်းဆုံး. ထို့အပြင်, ပဲရစ်သို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခရီးထွက်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သောစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်အလိုအပ်ဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့် la vie en ထကျနထေိုငျ.
2. အလိုရှိဆုံးစုံတွဲများအီတလီသို့အလည်အပတ်ခရီး: Amalfi ကမ်းခြေ
အစာ, ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း, နှင့်ပင်လယ်, Amalfi ကမ်းခြေကိုစုံတွဲများခရီးစဉ်အတွက်အလိုအပ်ဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေပါ. ကျောက်ဆောင်ပေါ်ရှိရောင်စုံအိမ်များ, အကွေ့အကောက်များသောလမ်းများ, ပင်လယ်နားမှာညဉ့်ကိုလွန်စေကြကုန်အံ့, ချစ်စရာစုံတွဲများအတွက်သင်လိုအပ်သမျှ’ အားလပ်ရက်.
အမ်မလီကမ်းခြေသည် 50 ချစ်စရာကောင်းတဲ့လမ်းကြားငယ်လေးတွေရဲ့ကမ်းခြေ, ကမ်းခြေ, နှင့်မမေ့နိုင်သောအမြင်များနှင့်အတူဝှက်ထားသောခရီးသွားနေရာထိုင်ခင်း. သင်ခရုဇ်သွားနိုင်, သို့မဟုတ်နေပူ, ချက်ပြုတ်, သို့မဟုတ်အံ့သြဖွယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်ညစာစားကြသည်. Amalfi ကမ်းခြေရှိရွေးချယ်စရာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်, တောင်အီတလီကမ်းခြေတစ်လျှောက်ရှိအလွန်သေးငယ်သောမြို့များတွင်, ကိုယ့်ရွေးပါ!
Florence တစ်ရထားနှင့်အတူ Naples မှ
ရထားနှင့်အတူ Naples မှဗင်းနစ်
တစ်ရထားနှင့်အတူ Naples မှ Pisa
3. Skye ၏ကျွန်း, စကော့တလန်
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကမ်းပါးများနှင့်အတူ, ရှုခင်းများ, နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ယဉ်ကျေးမှု, စကော့တလန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. Skle Isle of Skye သည်စကော့တလန်၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောလှပသောဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်အနည်းဆုံးလိုအပ်လိမ့်မည်2၎င်း၏အများအပြားအလှအပခံစားရန်ရက်သတ္တပတ်.
သငျသညျမြင်ကွင်းကိုလေးစားချင်ပါသလား, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး အတွက်ခြေလျင်ပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိ အများအပြားတောင်တက်လမ်းကြောင်း, Skye ကျွန်းသည်သဘာဝအံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်. ဥပမာ, သင်တစ် ဦး စွန့်စားစုံတွဲလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည် လွိုင်ကော်မြို့. သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျ Fairy ရေကူးကန်ထဲမှာအချို့သောရင်ခုန်စရာအချိန်ရှိနိုငျတယျ, သို့မဟုတ် Dunvegan ရဲတိုက်နှင့်ဥယျာဉ်သို့သွားရောက်ခြင်း.
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, Isle of Skye သည်စုံတွဲများအတွက်ခရီးစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, စကော့တလန်ကုန်းမြင့်ဒေသများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ချိုင့်ဝှမ်း, နှင့်အံ့သြဖွယ်ကမ်းရိုးတန်း. ဒီမှာ, သငျသညျလက်၌လက်လမ်းလျှောက်နိုင်ဘူး, ရိုးရှင်းစွာအတူတကွစွန့်စားမှုပျော်မွေ့.
နှင်းဖုံးထိပ်များနှင့်အတူ, အစိမ်းရောင်မြက်ခင်းပြင်, နှင့်ပန်းချီကားများနှင့်တူသောသာယာလှပအမြင်များ, ဆွစ်ဇလန်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစုံတွဲများခရီးထွက်ရာနေရာဖြစ်သည်. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အလိုအပ်ဆုံးသောစုံတွဲများခရီးစဉ်သည် Zermatt ဖြစ်သည်, ရိုင်းရေတံခွန်, နှင့် Lauterbrunnen ချိုင့်ဝှမ်း. သငျသညျ Adventures ကိုချစ်လျှင် Zermatt သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနှင်းလျှောစီးခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့မင်းကသာယာလှပတဲ့နေရာမှာအနားယူချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Lauterbrunnen ချိုင့်ဝှမ်းစံပြဖြစ်ပါတယ်.
ဆွစ်ဇာလန်၌အဆုံးမဲ့စုံတွဲများခရီးစဉ်များရှိသည်, ဒါကြောင့်တကယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, သငျသညျအများအပြားရင်ခုန်စရာအစက်အပြောက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒုတိယပျားရည်ဆမ်းခရီးအတွက်, သို့မဟုတ်သင်အချင်းချင်းတန်ဖိုးထားချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်, အထူးအခါသမယတွင်. ထိုကွောငျ့, it is really recommended to plan at least7ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့တစ်ရက်ခရီး.
Lucerne သည်ရထားနှင့်အတူ Lauterbrunnen သို့
ရထားနှင့်အတူ Lauterbrunnen မှဂျီနီဗာ
5. ဗင်းနစ်, အီတလီ
အစားအစာကောင်း, အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလေထု, အများအပြားဝှက်ထားသောရင်ခုန်စရာအစက်အပြောက်. ဗင်းနစ်သို့ခရီးစဉ်သည်စုံတွဲတိုင်း၏ရေပုံးစာရင်းတွင်ဖြစ်သည်. ဗင်းနစ်သို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခရီးသွား The ည့်သည်အရေအတွက်မှာထူးခြားသည်, သို့သော်, ၎င်း၏ကျက်သရေနှင့်လှပမှုသည်သင့်ကိုအချိန်တိုင်းတွင်ဖမ်းစားလိမ့်မည်. တကယ်တော့, အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်, သင်ပင်လူတိုင်းကိုသတိထားမိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း, ရုံသင်၏ရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့အပေါ်အံ့သြဖွယ်အချိန်ရှိသည်.
ဗင်းနစ်သို့ခရီးစဉ်သည်ထိပ်ဆုံးမှတစ်ခုဖြစ်သည်5အများဆုံးလိုချင်သောစုံတွဲများသည်စနေ၊. မြို့ထဲမှာမြင်ကွင်းတွေအများကြီးရှိတယ်, အီတလီအစားအစာ, နှင့်အံ့သြဖွယ်နေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာ, ဒါကြောင့်သင်တစ် ဦး gondola အပေါ်ပရဒိသုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. သို့သျောလညျး, သငျသညျပတျဝနျးကငျြအီတလီကျောက်မျက်ရတနာမှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဆန္ဒရှိလျှင်ထို့နောက်ဗင်းနစ်, သငျသညျအများအပြားထဲကတစ်ခုအပေါ်သွားနိုင်ပါတယ် ဗင်းနစ်ကနေတစ်ရက်ခရီးတွေ.
6. အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစရာများလိုသောစုံတွဲများ: ပြင်သစ် Alps
Glamping ဥရောပရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်အပူဆုံးခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်, ပြင်သစ် Alps နှင့်အတူပေါင်းစပ်, မင်းမှာအချစ်ဆုံးစုံတွဲတွေရှိတယ်’ ခရီးစဉ်. ဤကဲ့သို့သောစခန်းချခြင်းသည်အခြေခံတဲတဲစခန်းများထက်ပိုသာယာသည်. ရိုင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝ၌ထားကြ၏, ပြင်သစ်အဲလ်ပ်တောင်၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များနှင့်အတူ.
သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘန်ဂလို၌ထထွေး, ပျူငှါနွေးထွေးသောအခန်း, သီချင်းဆိုငှက်များကိုနှိုး, ကော်ဖီသောက်ခြင်း, နှင့်အိမ်တံခါးမှဖြောင့်တောင်တက်သွား – နတ်သမီးပုံပြင်အချစ်ဇာတ်လမ်း. သင့်ရဲ့အချစ်သိုက်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသည့်အခါ, နှင့်အများဆုံးသာယာလှပနေရာများတွင်, သငျသညျမမေ့နိုင်သောရင်ခုန်စရာအားလပ်ရက်များအတွက်ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး.
လိုင်ယွန်မှရထားနှင့်အတူ Nice မှ
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Nice မှပဲရစ်
တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူပဲရစ်မှကိန်း
7. အမ်စတာဒမ်: အိမ်လှေအားလပ်ရက်အားလပ်ချိန်
အမ်စတာဒမ်သည်ဥရောပရှိစုံတွဲများအတွက်ပျော်ရွှင်စရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, နှင့်အိမ်သူအိမ်သားလှေနေထိုင်အမ်စတာဒမ်အတွက်အများဆုံးရင်ခုန်စရာဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ houseboats အမ်စတာဒမ်ရဲ့အိုင်ကွန်တစ်ခုဖြစ်သည်, တူးမြောင်းတစ်လျှောက်ရပ်ထား. သို့သျောလညျး, သငျသညျအတွက်တစ်ချိန်က, သင်ကစူပါပျူငှါနွေးထွေးသောတွေ့လိမ့်မည်, ရင်းနှီးသော, တူးမြောင်းများကိုနှစ်သက်သောလူအုပ်မှအကာအကွယ်ပေးခဲ့သည်.
သံသယတစ်ခုမှမရှိဘဲ, အမ်စတာဒမ်ရဲ့ Vibe, လေထု, ယဉျကြေးမှု, နှင့်အလှအပကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစုံတွဲများအထင်ကြီး. ထို့အပွငျ, မြို့နှင့်မြစ်မြင်ကွင်းများ, သင့်ရဲ့ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကဖီး, မင်းရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဖြစ်လိမ့်မယ်.
ကြီးစွာသောအစားအစာစျေးကွက်, ချစ်စရာကောင်း Notting Hill က, Kensington ဥယျာဉ်, လန်ဒန်သို့လင်မယားခရီးစဉ်သည်မမေ့နိုင်သောခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်. မြို့သည်ဤမျှလောက်များစွာသောလှုပ်ရှားမှုများပေးထားပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအတွက်အရမ်းများတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်.
ထိုကွောငျ့, ဒါဟာသုတေသနနည်းနည်းလုပ်နေကျထိုက်သည်, အကောင်းဆုံးတည်နေရာကနေ, နှင့်သင်အမှန်တကယ်လုပ်ချင်သောအရာ. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင်လည်ပတ်လိုသည့်စျေးကွက်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုများစာရင်းကိုအတူတကွထားပါ. ဖြည့်စွက်ကာ, များစွာသောအပေါ်ကော့တေးအဘို့အချိန်အများကြီးထားခဲ့ပါ ခေါင်မိုးပေါ်အရက်ဆိုင်. ခရီးစဉ်၏အနှစ်သာရတစ်ခုမှာအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ယူပြီးအတူတကွပေါက်ကွဲစေခြင်းဖြစ်သည်.
အမ်စတာဒမ်ကိုလန်ဒန်သို့တစ် ဦး ရထားနှင့်အတူ
9. အလိုရှိဆုံးစုံတွဲများအီတလီသို့ခရီး: Tuscany ခုနှစ်တွင်ဝိုင်ခရီးစဉ်
စပျစ်ဥယျာဉ်, တောက်ပသောအစိမ်းရောင်တောင်ကုန်းများ, နှင့် အီတလီအစားအစာ, အီတလီတစ်ခရီး ဝိုင်မြို့တော် တိုင်းစုံတွဲရဲ့ပုံးစာရင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်. စပျစ်ဥယျာဉ်တလျှောက်လမ်းလျှောက်, သင့်ရဲ့အနီရောင်စပျစ်ရည်ကနေရင်း, နှင့်ငြိမ်းချမ်းလေထုထဲမှာလုပ်ကြ, အကယ်စင်စစ် Tuscany ဘုရားသခင့အသံကြောင်းသဘောတူပါလိမ့်မယ်.
တကယ်ပါပဲ, Tuscany သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခရီးဆုံးသွားသောထိပ်ဆုံးစုံတွဲများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်. မှော်အမြင်များနှင့်ဝိုင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှစုံတွဲများကိုဖမ်းစား, သူတို့ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြန်လာစေ.
10. အလိုရှိဆုံးစုံတွဲများတရုတ်ပြည်သို့ခရီး: Yulong မြစ်
တရုတ်နိုင်ငံသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့် Yulong မြစ်သည်သာယာလှပနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. Yulong မြစ်သည်လီမြစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, ရှည်လျားပြီးအဆုံးမဲ့, အစိမ်းရောင်စိုက်ခင်းများကဝိုင်းရံ, ကျေးရွာပေါင်း, နှင့်ဆန်လယ်ကွင်း. ထို့ကြောင့်, Yulong မြစ်တစ်လျှောက်စွန့်စားမှုတစ်ခုလုပ်ခြင်းသည်မှော်အတတ်ဖြစ်သည်.
အပြင် သဘာဝအလှအပ, အဆိုပါ Yulong မြစ် ကျေးရွာများနှင့်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, Yangshuo inရိယာတွင်သင်နေထိုင်သည့်ဘဝပုံစံကိုလေ့လာရန်ရှားပါးသောအခွင့်အရေးတစ်ခုသင်ရရှိလိမ့်မည်, ယဉျကြေးမှု, နဲ့အနုပညာ, ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းရာစုနှစ်များစွာအဘို့ဖြစ်သကဲ့သို့.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့သည်သင်တို့ဤအရာတစျခုစီစဉ်ကူညီရန်ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည် 10 အလိုရှိဆုံးစုံတွဲများရထားဖြင့်ခရီးထွက်သည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ ၁၀ ခုအလိုရှိဆုံးစုံတွဲ ၁၀ ခရီး” ကိုသင်၏ site ပေါ်တွင် emb လုပ်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fmost-wanted-couples-trips%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, သင်တို့အား / fr အဆိုပါ / ru ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း စုံတွဲများ CouplesTrips RomanticCities RomanticEurope RomanticTrips RomanticViews